Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ịmegharị njem nlegharị anya maka ọdịnihu na ụwa: UNWTO Task Force Saudi Style ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
Taa, UNWTO General Assembly nwere dike abụọ:
Ọ Ahmed Al Khateeb, Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na ala eze Saudi Arabia
HE Reyes Maroto, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na ala eze Spain
Ụnyaahụ, UNWTO General Assembly nwere otu dike - onye Hon. Gustav Segura Costa Sancho Minista njem nlegharị anya maka Costa Rica.
Ụnyaahụ bụ mmeri maka ochichi onye kwuo uche ya na UNWTO General Assembly mgbe na ntuli aka nzuzo, ndị nnọchiteanya sitere na mba 80 kwadoro Zurab Pololikashvili dị ka odeakwụkwọ ukwu maka afọ 4 ọzọ.
Taa bụ nnukwu mmeri maka ọchịchị onye kwuo uche ya mgbe megidere ọchịchọ nke Secretary General, ọdịnihu nke World Tourism na UNWTO etinyere n'aka Task Force ọhụrụ - atụmatụ nke Saudi Arabia na Spain wetara.
A tụlere ihe ngosi mbụ nke ihe dị na pipeline na UNWTO Regional Commission for Africa na Cabo Verde na Septemba 2, 2021.
Dị ka ụnyaahụ, ọchịchị onye kwuo uche ya meriri ọzọ taa
Na UNWTO General Assembly na-aga n'ihu na Madrid, atumatu imeghari njem nlegharị anya maka Ọdịnihu, nke alaeze Saudi Arabia na Spain wetara, kwadoro taa.
Ndị isi njem kwuru eTurboNews"Nke a bụ ihe na-agbanwe egwuregwu maka ngalaba njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ."
Onye odeakwụkwọ ukwu megidere atụmatụ a, ebe ọ bụ na ọ na-etinye ọdịnihu nke ihe omume iji megharịa njem na njem nlegharị anya site na tebụl ya ma banye n'aka General Assembly na Executive Council, n'okpuru ọchịchị Saudi Arabia na Spanish.
Zurab Pololikashvili chere na atụmatụ nke ya zuru oke iji megharịa ọdịnihu njem nlegharị anya ma gbaa ndị isi ọgbakọ ume ka ha ghara ịtụ vootu maka atụmatụ Saudi-Spanish. Ọ chọghị ka ndị ọrụ nọọrọ onwe ha pụrụ iche na imegharị njem nlegharị anya.
Onye ode akwụkwọ njem nlegharị anya, HE Najib Balala si Kenya, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Saudi Arabia HE Mr. Ahmed Al Khateeb, na Minista njem nlegharị anya maka Jamaica HE Edmund Bartlett niile na-amụmụ ọnụ ọchị na foto a e mere taa ka emechara ntuli aka.
Nkwenye: Ndị njem nlegharị anya na-emegharị maka ndị ọrụ na-eme n'ọdịnihu
Ndị nnọchiteanya UNWTO kwetara, nke a bụ nnukwu mmeri maka njem nlegharị anya ụwa.
Ọrịa COVID-19 egosila, dị ka ọ dịtụbeghị mbụ, ọrụ dị mkpa akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nke njem nlegharị anya na-arụ n'ụwa niile. Njem nlegharị anya bụ isi ihe na-ebute akụ na ụba ụwa, mana ọrịa na-efe efe enweela mmetụta jọgburu onwe ya n'ụwa niile ma metụtala ngalaba a dị mkpa nke ukwuu, na-ebelata uru akụ na ụba ọ na-emepụta. 62 nde ọrụ na US $ 4 trillion na GDP efuola na 2020. Ụwa kwesịrị ime ihe iji zere nke a na-eme ọzọ na iji mee ka mpaghara a dị mkpa ume.
Ka ngalaba ahụ wee gbakee, na-eme nke ọma, ma bụrụ nke na-agbanwe agbanwe n'ọgba aghara zuru ụwa ọnụ n'ọdịnihu, ọ chọrọ mgbanwe, ntinye aka na itinye ego iji baara ndị mmadụ uru n'ụwa nile, karịsịa na mba ndị na-emepe emepe. Iji megharia ngalaba njem nlegharị anya n'ụzọ pụtara ìhè n'ọ̀tụ̀tụ̀ zuru ụwa ọnụ, anyị chọrọ nnukwu mmekorita mba ụwa yana otu mba ụwa nyere ikike. Nke a ga-ahụ na usoro agbakwunyere na nhazi nke na-anabata njem nlegharị anya nwere njikọ chiri anya yana ihe jikọrọ ya na ya.
na-ebuli ntinye aka na ngalaba na mmezu ebumnuche mmepe nke United Nations Sustainable Development Goals. Ugbu a bụ oge iji megharịa njem nlegharị anya maka ọdịnihu site na mgbanwe, ntinye aka na itinye ego.
Dị ka onye mmeri na-eme njem nlegharị anya nke na-achọ ka ya na gọọmentị ndị ọzọ nwere mmasị na ụlọ ọrụ nkeonwe na-arụkọ ọrụ, Saudi Arabia na-egosipụta ntinye aka ya n'ịkwado imekọ ihe ọnụ n'ogo niile nkwa nke dị n'obi nke Diriyah Communiqué bịanyere aka na n'oge Saudi Arabia G20 Presidency na 2020. , nke ghọtara ọrụ dị mkpa nke mmekọrịta ọha na eze na nkeonwe na-arụ na ngalaba njem.
Ọ bụghị naanị na Saudi Arabia kwadoro, ọ dịkwa njikere ịnye ihe onwunwe dị mkpa iji wusie ngalaba ahụ ike dabere na ụkpụrụ nke nkwado na ohere maka mmadụ niile, na-arụ ọrụ na site na ụlọ ọrụ dị iche iche. Dị ka otu nnukwu otu onye na-etinye ego n'ụwa na njem nlegharị anya, Saudi Arabia ekwela $ 100 nde iji rụọ ọrụ Tourism Community Initiative site na World Bank, dị ka ihe na-akpata mgbake mpaghara, site n'ime ka obodo site na mmemme iwulite ikike mmadụ na ụlọ ọrụ iji gbasaa uru akụ na ụba nke njem nlegharị anya.
Saudi Arabia abụrụla onye ọrụ UNWTO na-arụsi ọrụ ike, na-akwado atụmatụ dị mkpa gụnyere UNWTO Academy na UNWTO Mmemme Obodo kacha mma yana ịbụ ebe obibi nke UNWTO Regional Office, nke mepere na Mee 2021.
Alaeze nke Saudi Arabia na-enye UNWTO na ndị otu ya atụmatụ imegharị njem nlegharị anya maka ọdịnihu ọnụ, gụnyere site n'ịmepụta njem nlegharị anya na-emegharị maka ọdịnihu Task Force. Atụmatụ a chọrọ ijikọ ọha na eze na nkeonwe, nye ndị otu dị iche iche ike, na ịbawanye mmekorita n'etiti ndị na-eme ihe iji chebe megide ihe ịma aka n'ọdịnihu. The Redesigning Tourism for the Future Task Force na-achọkwa ime ka UNWTO nwee ume site na ndị ọzọ,
na-atụle mgbanwe na ụzọ ọrụ UNWTO ugbu a, na/ma ọ bụ mgbanwe ndị ọzọ nke UNWTO.
Ndị njem nlegharị anya na-emegharị maka ndị ọrụ na-eme n'ọdịnihu
Ndị na-eme njem nlegharị anya maka Ọdịnihu Task Force ga-enwe otu steeti ndị otu mpaghara nke ọ bụla na-ahụ maka mpaghara gbakwunyere oche. N'ịwulite na Saudi Arabia gosipụtara ntinye aka na mmepe nke ngalaba ahụ, yana atụmatụ ya imegharị njem nlegharị anya maka ọdịnihu, Alaeze Saudi Arabia na-enye onwe ya ka ọ bụrụ onyeisi oche nke Redesigning Tourism for the Future Task Force.
Mkpebi nke Spain na Saudi Arabia.
Mgbakọ izugbe: Mkpebi kwadoro Disemba 2, 2021
N'ịkọwa na Minista njem nlegharị anya nke Alaeze Saudi Arabia, HE Mr. Ahmed Al Khateeb, agwala onye odeakwụkwọ ukwu nke Alaeze Saudi Arabia atụmatụ imeghari njem nlegharị anya maka ọdịnihu nakwa na atụmatụ a gụnyere iguzobe njem nlegharị anya na-emegharị maka ọdịnihu. Ndị ọrụ na-arụ n'ọdịnihu,
Mgbe o nyochachara ozi nke odeakwụkwọ ukwu nyefere na atụmatụ a,
N'igosi na ụwa chọrọ ime ihe n'ihi mkpa njem nlegharị anya ejirila ọrịa COVID-19 na-ewusi ike yana na a ka na-enwe mmetụta ọjọọ nke ọrịa a, ọkachasị na mba ndị ka na-emepe emepe, nke Iwu UNWTO kwuru banyere ya.
N'icheta na mmetụta mmekọrịta ọha na eze nke njem nlegharị anya abụrụla nke ukwuu yana nnukwu ihe. na mmekorita nke ọtụtụ akụkụ dị mkpa iji wusie ngalaba ahụ ike.
N'icheta na dịka edemede 12(j) nke ụkpụrụ nke UNWTO, Nzukọ Ezumezu nwere ike guzobe otu ọrụ aka ma ọ bụ mpaghara ọ bụla nwere ike ịdị mkpa.
Na-amata mkpa atụmatụ dị n'ịrụ ọrụ na ndị otu UNWTO niile na igodo
atụmatụ iji megharịa njem nlegharị anya maka ọdịnihu na-elekwasị anya na mgbanwe, ntinye aka,
na itinye ego;
Na-amata mkpa ọ dị itinye aka n'ịhazigharị njem nlegharị anya maka Ọdịnihu
erite uru niile;
Na-echeta na Alaeze nke Saudi Arabia ugbu a na-akwado Office Regional nke
UNWTO na Riyadh, Alaeze nke Saudi Arabia;
Kpebisie ike iguzobe otu ndị ọrụ n'ime UNWTO aha ya bụ Redesigning
Njem nlegharị anya maka ndị ọrụ ọrụ n'ọdịniihu;
Kpebisie ike inye ndị na-emegharị njem nlegharị anya maka ndị ọrụ n'ọdịniihu na
dị ka atụmatụ a nke Alaeze Saudi Arabia si dị;
Kpebie na ikike nke Redesigning Tourism for Future Task Force ga
na-aga n'ihu ruo oge nke iri abụọ na isii nke Mgbakọ Ọgbakọ ma ga-emegharị ozugbo ọ gwụla ma ekpebie ma ọ bụghị site n'ọtụtụ mba ndị otu zuru oke nọ ugbu a na ịtụ vootu;
Na-ekpebi na a ga-eji ya megharịa njem nlegharị anya maka ọdịnihu
otu Steeti ndị otu mpaghara họpụtara nke ọ bụla n'ime kọmitii mpaghara gbakwunyere oche. lf a
Regional Commission akọwapụtabeghị onye otu Task Force ya na njedebe nke nkeji mbụ nke 2022, mgbe ahụ, onye isi oche ga-akpọ otu steeti sitere na mpaghara ahụ.
Kọmishọna ịbanye na Task Force;
Na-ahọpụta ala eze Saudi Arabia ka ọ bụrụ onye isi oche nke Redesigning Tourism maka ndị
Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnihu;
Na-enye ikike imegharị njem nlegharị anya maka ndị ọrụ ga-eme n'ọdịnihu ịnakwere iwu nke ya
usoro dị ka achọrọ;
Na-agba ndị na-eme njem nlegharị anya maka ọdịnihu Task Force ka ịmalite ọrụ ya dị ka
ngwa ngwa o kwere mee na ọ gaghị eme ka njedebe nke nkeji mbụ nke 2022;
Na-akpọ ndị na-emegharị njem nlegharị anya maka Ọdịnihu Task Force ka ha nyefee akụkọ na
ndụmọdụ ndị isi oche na Nzukọ Ndị Isi,
dị ka ọ pụrụ iche na o kwesịrị ekwesị.
l. Atụmatụ imegharị njem nlegharị anya maka ọdịnihu
Site n'akwụkwọ ozi nke ụbọchị 25 Ọktoba 2021, Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Alaeze Saudi Arabia, HE Mr. Ahmed Al Khateeb, gwara onye odeakwụkwọ ukwu nke atụmatụ nke Alaeze Saudi Arabia ka ya na ndị mmekọ mba ụwa na-arụkọ ọrụ iji megharịa njem nlegharị anya. ime ka ọha na eze na nkeonwe dị n'otu, nye ndị otu dị iche iche ike na ịbawanye mmekorita n'etiti ndị na-eme ihe iji chebe ihe ịma aka n'ọdịnihu site na usoro dị iche iche, gụnyere iguzobe n'ime UNWTO otu ndị ọrụ iji chegharịa njem nlegharị anya maka ọdịnihu ("Redesigning Tourism for Future Task" Ike").
Mpempe akwụkwọ ozi ka etinyere na akwụkwọ dị ugbu a dị ka Annex l.
N'arịrịọ nke Alaeze Saudi Arabia, odeakwụkwọ ukwu na-enyefe atụmatụ a iji megharịa njem nlegharị anya maka ọdịnihu gụnyere iguzobe njem nlegharị anya maka ọdịnihu Task Force, maka mkpebi nke General Assembly nke UNWTO, dịka iwu 38 si dị. (1) na 40 nke Iwu Usoro nke Mgbakọ Ozuruọnụ.
II. Mkpa Ime Ihe
Njem nlegharị anya bụ isi ihe na-akpata akụ na ụba ụwa, mana oria ojoo COVID-19 enweela mmetụta na-emebi emebi n'ụwa niile ma metụtakwara ngalaba a dị mkpa nke ukwuu, na-ebelata uru akụ na ụba ọ na-emepụta. 62 nde ọrụ, na USD 4 trillion na GDP kwa afọ efuola na 2020. Mba niile atawo ahụhụ. Mana mmetụta a adalatala nke ọma na mba ndị na-emepe emepe.
Alaeze nke Saudi Arabia ghọtara na amụma zuru ụwa ọnụ ugbu a adịghị egosipụta mkpa dị ukwuu nke mpaghara njem nlegharị anya na oge eruola ka nke a gbanwee. Njem nlegharị anya bụ isi ihe na-ebute akụ na ụba ụwa. Tupu ọrịa a na-efe efe, 10.4% nke GDP zuru ụwa ọnụ bụ njem na njem nlegharị anya na-emepụta 1 n'ime ọrụ 4 ọhụrụ sitere na ngalaba njem.
Ọrịa ọjọọ a enweela mmetụta jọgburu onwe ya n'ụwa niile ma metụtakwara ngalaba a dị mkpa nke ukwuu, na-ebelata uru akụ na ụba ọ na-emepụta.
Ka ngalaba ahụ wee gbakee, na-eme nke ọma ma bụrụ nke na-adịgide adịgide maka ihe egwu zuru ụwa ọnụ n'ọdịnihu, ọ chọrọ mgbanwe, ntinye aka na itinye ego iji baara ndị mmadụ uru n'ụwa nile, na karịsịa na mba ndị na-emepe emepe. Iji megharia ngalaba njem nlegharị anya n'ụzọ pụtara ìhè n'ọ̀tụ̀tụ̀ zuru ụwa ọnụ, anyị chọrọ nnukwu mmekorita mba ụwa yana otu mba ụwa nyere ikike.
Nke a ga-eme ka usoro nhazi na nhazi nke ọma na-anabata njem njem nlegharị anya jikọtara ọnụ na nke jikọrọ ọnụ ma na-ebuli ntinye aka nke ngalaba na ebumnuche United Nations Sustainable Development Goals.
III. Iwu nke imegharị njem nlegharị anya maka ndị ọrụ na-eme n'ọdịnihu
Iji dozie ihe ndị a dị n'elu, Alaeze Saudi Arabia na-atụ aro ka UNWTO guzobe njem nlegharị anya na-emegharị maka ọdịnihu Task Force.
Ndị njem nlegharị anya na-emegharị maka ndị ọrụ n'ọdịniihu ga-enye iwu:
i. mee ka UNWTO nwee ume site, n'etiti ndị ọzọ, na-atụle mgbanwe na UNWTO
usoro ọrụ ugbu a, yana nguzobe nke mmemme ka mma na
atumatu, iji hụ na UNWTO nwere ike ije ozi mkpa dị adị na n'ọdịnihu
ngalaba njem nlegharị anya, ọkachasị gbasara mba ndị na-emepe emepe;
ii. leba anya n'usoro ndị na-anabata oku zuru ụwa ọnụ maka UNWTO nke ahụ
na-enye mba ndị otu ya mmemme na atụmatụ emelitere nke ọma, na
ọ nwere ike iji nsonaazụ a na-ahụ anya na nke a tụrụ atụ mee nke bụ
emebere ka ijere ọdịnihu ozi, nke na-egbo mkpa nke mba ndị otu niile
gụnyere steeti ndị na-emepe emepe na nke dabara na ogidi isi atọ nke Nhazigharị
Njem nlegharị anya maka Ọdịnihu: nkwado, nnabata na nsonye; na
iii. gbaa ume ma hụ na nsonye bara uru nke ndị na-abụghị nke steeti
nhazigharị nke ngalaba njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Iwu a nke ndị na-emegharị njem nlegharị anya maka ndị ọrụ na-ahụ maka Ọdịnihu dabara n'ebumnobi na ebumnuche UNWTO.
Iji hụ na Ntugharị Nlegharị anya maka Ọdịnihu Task Force nwere ike imeju ya
ikike, ọ ga-aga n'ihu ruo opekata mpe 26th (nkịtị) nnọkọ nke Mgbakọ General nke UNWTO. A ga-emeghari ikike imegharị njem nlegharị anya maka Ọdịnihu na-akpaghị aka, ọ gwụla ma ọtụtụ mba ndị nọ na ịtụ vootu kpebiri ma ọ bụghị ya.
IV. Saudi Arabia: Na-akpọ ka ha gbanwee ọdịnihu nke njem nlegharị anya ọnụ
Dị ka onye mmeri na-eme njem nlegharị anya, Saudi Arabia na-egosipụta ntinye aka ya n'ịkwado imekọ ihe ọnụ n'ọkwa niile nkwa nke dị n'obi nke Diriyah Communiqué bịanyere aka na ya n'oge Saudi Arabia's G20 Presidency na 2020, nke ghọtara ọrụ dị mkpa nke mmekọrịta ọha na eze na-arụ na ngalaba njem.
Saudi Arabia abụrụla onye otu UNWTO na-arụsi ọrụ ike, na-akwado atụmatụ dị mkpa gụnyere UNWTO Academy na UNWTO Mmemme Obodo kacha mma yana ịbụ ebe obibi nke UNWTO Regional Office meghere na Mee 2021.
Dị ka otu nnukwu otu onye na-etinye ego n'ụwa na njem nlegharị anya, Saudi Arabia ekwela USD 100 nde iji rụọ ọrụ Tourism Community Initiative site na World Bank dị ka ihe na-akpata mgbake mpaghara site n'inyere obodo aka site na mmemme ike mmadụ na ụlọ ọrụ iji gbasaa uru akụ na ụba nke njem nlegharị anya.
Ala eze Saudi Arabia ejirila ọrụ ndu n'ime UNWTO nke ọma.
Na mgbakwunye na ịnabata Ụlọ Ọrụ Mpaghara nke UNWTO, n'afọ a, Alaeze Saudi Arabia kwadoro Nzukọ Kọmitii Nsogbu Njem Nleta zuru ụwa ọnụ nke UNWTO, yana nzukọ 47th nke UNWTO Regional Commission maka Middle East. Ala eze Saudi Arabia arụwokwa ọrụ n'ọtụtụ kọmitii na akụkụ nke UNWTO, gụnyere dịka onye isi oche nke abụọ ugbu a nke Council Executive.
Dịka akụkụ nke ntinye aka ya gosipụtara na Redesign Tourism for the Future, Alaeze Saudi Arabia enyela onye isi oche nke Redesigning Tourism for Future Task Force.
saad rehman ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 6, 2021 na 11:17
Edemede mara mma na nke ọma, bara uru ma baa uru. Nọgide na-ebipụta ọdịnaya bara uru dị ka nke a!
ịhịa aka n'ahụ na missisauga